တရုတ် Corneal မြေမျက်နှာသွင်ပြင်ပုံရိပ်ဒစ်ဂျစ်တယ်စနစ်တူရိယာ sw-6000 ထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့်စက်ရုံ | SDK
မျက်ကြည်လွှာအပေါ်ယံပိုင်းတွင်အပိုင်း ၃ ပိုင်းပါ ၀ င်သည်။ acPlacido disc projection system: ၂၈ သို့မဟုတ် ၃၄ ကွင်းကိုမျက်ကြည်လွှာကိုအလယ်ဗဟိုမှအစွန်ထိမျက်ကြည်လွှာပေါ်သို့ဖြာထွက်စေသည်။ eReal-time ပုံရိပ်စောင့်ကြည့်စနစ်; မျက်ကြည်လွှာမျက်နှာပြင်ပေါ်တွင်ခန့်မှန်းထားသောလက်စွပ်ပုံကိုမျက်ကြည်လွှာပုံရိပ်အားအကောင်းဆုံးအခြေအနေတွင် ယူ၍ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာနိုင်ရန်အတွက်မျက်ကြည်လွှာကိုချိန်ညှိနိုင်သည်။ ③ကွန်ပျူတာ၊ ပုံရိပ်ဖော်စနစ် ကွန်ပျူတာသည်သိမ်းဆည်းထားသောပုံများကိုဒစ်ဂျစ်တယ်မှ ဦး စွာခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာရန်သတ်မှတ်တွက်ချက်ပုံသေနည်းများနှင့်အစီအစဉ်များကိုသုံးပါ၊ ထို့နောက်ရောင်စုံဖန်သားပြင်များပေါ်တွင်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုရလဒ်များကိုပြသသည်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင် digitized စာရင်းအင်းရလဒ်များကိုလည်းအတူတကွပြသသည်။
မျက်ကြည်လွှာ၏မျက်နှာပြင်သည်မျက်ကြည်လွှာမျက်နှာပြင်တစ်ခုလုံးကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာရန်ဖြစ်သည်။ projection ring တစ်ခုစီသည် processing system တွင် ၂၅၆ မှတ်ပါဝင်သည်။ ထို့ကြောင့်မျက်ကြည်လွှာတစ်ခုလုံးတွင်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းစနစ်ထဲသို့အချက်ပေါင်း ၇၀၀၀ ကျော်ရှိသည်။ မျက်ကြည်လွှာမြေမျက်နှာသွင်ပြင်သည်စနစ်တကျ၊ တိကျ။ တိကျသည်ကိုတွေ့မြင်နိုင်သည်။ မျက်ကြည်လွှာကိုမြေမျက်နှာသွင်ပြင်ကိုမျက်ကြည်လွှာဆိုင်ရာ astigmatism ခွဲခြားသတ်မှတ်ရန်၊ မျက်ကြည်လွှာဂုဏ်သတ္တိကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ။ အချက်အလက်များ (သို့) ကွဲပြားသောအရောင်များဖြင့်ပြသသည်။ ဝင်ရိုးနှစ်ချောင်းကြားကွာခြားချက်သည်မျက်ကြည်လွှာဆိုင်ရာမျက်မှန်ဖြစ်သည်။ ပုံမှန်မဟုတ်သောမျက်ကြည်လွှာကိုကွေးညွှတ်ခြင်းအားစစ်ဆေးခြင်း၊ မျက်ကြည်လွှာမြေပုံပေါ်လာခြင်းသည် subclinical အဆင့်တွင် keratoconus နှင့် keratoconus ကိုစောစောစီးစီးရောဂါရှာဖွေနိုင်ပြီး keratoconus ၏ရောဂါရှာဖွေခြင်း၏တိကျမှုသည် ၉၆%အထိမြင့်မားသည်။ ထို့အပြင်၎င်းကိုမျက်ကပ်မှန်များကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာသောမျက်ကြည်လွှာပုံမမှန်ရောဂါရှာဖွေခြင်းအတွက်သုံးနိုင်သည်။
မျက်ကြည်လွှာ topograph SW-6000 သည် PLACIDO cone၊ ကွင်း ၃၁ ကွင်း၊ စုစုပေါင်း ၇၉၃၆ မှတ်ကိုအသုံးပြုသည်။ ၎င်းကိုတွက်ချက်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းဖြင့်မျက်ကြည်လွှာ astigmatism ကိုလက်တွေ့ရောဂါရှာဖွေရာတွင်သုံးသည်၊ မျက်ကြည်လွှာပုံသဏ္န်ကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ။ မျက်ကြည်လွှာအလင်းပြန်မှုစွမ်းအားကိုဒေတာ (သို့) ကွဲပြားသောအရောင်များ ပြသ၍ axial curvature map၊ tangential curvature မြေပုံ၊ အမြင့်မြေပုံ၊ မျက်ကြည်လွှာမှန်ပုံရိပ်နှင့်မျက်ကြည်လွှာကိုပြသသည်။ 3D ပုံဆွဲခြင်း မျက်ကြည်လွှာ ခွဲ၍ မရသောခွဲစိတ်မှုအားခွဲစိတ်မှုမတိုင်မီအကဲဖြတ်ခြင်း၊ မျက်ကပ်မှန်တပ်ခြင်း၏အချက်အလက်များကိုလမ်းညွှန်ပေးနိုင်ပြီးမျက်ကပ်မှန်တပ်ဆင်ခြင်း၏တိကျမှုကိုတိုးတက်စေနိုင်သည်။
၁၀.၉၁ မီလီမီတာ (လုံးပတ်)
± 0.02 မီလီမီတာ
၅။ Placido လက်စွပ်နံပါတ်
၇။ ၎င်းသည် axial curvature map, tangential curvature map, height map, simulated corneal mirror image and corneal 3D map ။
၈။ အရည်အသွေးမြင့်အရောင် inkjet ပရင်တာထုတ်ပုံ
၉။ စမ်းသပ်ခေါင်းညှိခြင်းအကွာအဝေး၊ ဘယ်ဘက်နှင့်ညာဘက် ၈၆ မီလီမီတာ၊ 40mm ထက်ပိုသောရှေ့နှင့်နောက်ဘက်; ၃၀ မီလီမီတာအထက်နှင့်အောက်၊ 50mm ထက်ပိုသောမေးရိုးထောက်ခံမှုကွင်း;
10. Contact lens အလိုက်လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်လုပ်ဆောင်ချက်
11. Keratoconus ထောက်လှမ်း function ကို
ယခင်: တိကျမြင့်မားသောတိုင်းတာခြင်း rebound tonometer SW-500
နောက်တစ်ခု: မျက်စိအထူးကု AB Ultrasound Diagnostic Apparatus (AB)